Home Movies in DVD - Sida loo Beddelaan iyo Guba Home Movies / Videos in DVD
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan iyo Guba Home Movies / Videos in DVD
Inta badan dadka jecel yihiin in ay u qoraan munaasabadaha gaarka ah ee nolosha, xaflad aroos, xaflad qalin jabin, Reunion qoyska, iwm si ay u sameeyaan daqiiqado noo joogto ah. Si kastaba ha ahaatee, filimada guriga toogtay waa uun ma ku filan si aad xusuus macaan. Si aad sawir iyo video kuwa xasuus macaan, edit iyo gubi filimada guriga / videos in DVD xaqiiqdii waa doorashada ugu fiican ee tan iyo DVD cajalladaha waa dheer waarta oo lagu raaxaysan karaa ciyaaryahanka DVD ama TV. Waxa kale oo aad ku diri kartaa cajalladaha DVD ah in qoyska iyo saaxiibada si aad noloshaada iyo xusuusta iyaga la wadaagaan.
Si aad u gubi videos guriga si DVD, Wondershare xirfad DVD Creator si weyn lagu talinayaa. Sidaa daraadeed, aad edit karaa, retouch videos iyo gubi filimada guriga si DVD la kartoo bedeley DVD oo lacag la'aan ah. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, waxaad u tagi kartaa si DVD Creator for Mac . Kaliya u hubso in aad ka hesho version sax ah oo raac talaabooyinka si loogu badalo videos guriga si DVD fudayd (Tallaabooyinka qaadataa Screenshot Windows).
Free download guriga filimada in DVD gubi:
Sida loo edit iyo gubi filimada guriga / videos in DVD
Tallaabada 1. Transfer aad filimada guriga / videos in computer.
Wixii VHS iyo cajalado Analog fiidiyo : Haddii aad kombiyuutar kaarka qabashada video ah leedahay, taasi caadi ahaan waa ikhtiyaarka ugu fiican oo sahlan ee diinta aad video. Nasiib darro, kaliya kombiyuutarada-dhamaadka sare iyo xarunta warbaahinta kumbiyuutarada caadi ahaan soo qalabaysan kaararka. Haddii aan, waxay yihiin si caddaalad ah u qaali ah si aad u iibsato iyo guud ahaan mana istaahisho in lacag loogu isticmaalka mid waqtigan. Haddii aadan hubin haddii aad computer yimid kaarka qabashada video ah, tixraac buugga milkiilaha ama raadiyo kooban, S-Video, ama video kale gashiga yaala gadaasha dambe ee kombiyuutarka. Aqbasho in uu eego sida wax soo saarka on rikoodhkaaga.
Wixii videos digital ka fiidiyo DVD, Flash Memory fiidiyo iyo fiidiyo Hard drive : Waxaa jira xoogaa fursado ah oo aad kala dooran karto in videos digital wareejiyo DVD. Kuwaas waxaa ka mid Firewire / IEEE-1394, USB, S-Video, ama xirayaasha RCA. Sida ugu wanaagsan ee taasi ku sameeyn leh IEEE 1394 cable.
Tallaabada 2. Add videos guriga si DVD Creator ah
Orod DVD Creator oo guji "Import" xitaa dooro videos aad rabto in aad ku gubi ama jiitaa sii jeedi video files si ay leeg- tahay isha si ay u shuban. Keenista Photo waxa kale oo ay taageerayaan. Sida aad arki karto, aad ku eegaan karo videos ka xigay xaga midig iyo qabsato video mugga for saamaynta fiican.
Tallaabada 3. Edit gurigaaga video la dhisay-in editor video
Dooro video clip ah oo riix badhanka edit in uu furo suuqa kala Video Edit, halkaas oo aad si xor ah u astaysto kartaa videos by beerista, qoqobada, falinjeeerka, isagoo intaa ku daray saamaynta, isagoo intaa ku daray watermarks iyo wixii la mid ah.
Tallaabada 4. Dooro DVD menu ah
Dooro ka DVD free template menu dhisay-in aad DVD qoraalka iyo Customize ka thumbnails DVD menu, sawirada asalka, badhamada, iwm sida aad jeceshahay.
Tallaabada 5. Kulanka Xiisaha iyo gubi videos guriga si DVD
Demi in "Kulanka Xiisaha Leh" tab in aad eegtid aad video at in hab-waqtiga dhabta ah. Haddii wax loo baahan yahay in wax laga beddelo, si ay u tagaan tab ah oo u dhiganta sameeyo bedelaad qaar ka mid ah. Marka aad ku qanacsan tahay, u tag "Guba" tab in ay u samaysaa saldhigyo DVD sida uu qoraalku disc, bartilmaameedka wax soo saarka, heerka TV, muuqa iyo DVD drive, iwm oo ugu dambeyntii ku dhufo "Start" si loogu badalo filimada guriga si DVD.
More Talooyin: movies guriga Most / videos yihiin qaab la mid ah MP4, AVI ECT. Haddii aad rabto in aad ku gubi kuwaas / filimada videos in DVD, waxaad kaloo ka eegi kartaa hagaha: in DVD gubi MP4 , AVI gubi in DVD .